संघीय सरकालाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यको धन्यवाद, नक्सा जारी गर्नु ऐतिहासिक – Enayanepal.com
संघीय सरकालाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यको धन्यवाद, नक्सा जारी गर्नु ऐतिहासिक
२०७७, ११ जेष्ठ आईतवार मा प्रकाशित
कर्णाली प्रदेश सभाको छैटौ अधिवेशनको पहिलो बैठक आइतबार सुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले पठाएको पत्रलाई सभामुख राजबहादुर शाहीले सुनाई बैठक सञ्चालन गरेका थिए । बैठकमा संघीय सरकारले हिम्मत गरेर लिम्पियाधुरा सहित समेटेर नक्सा बनाएको बताउँदै धन्यवाद दिएका छन् । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए । भारतले नेपाललाई हेप्न खोजेको बताउँदै त्यसको जवाफ स्वरुप नक्सा निकाल्नु साहसिक कार्य भएको बताए ।
‘सरकार सबैको हो । हुलका हुल नागरिक उद्धार गर्नुभयो । तर त्यो सबैको उद्धार गर्नुपथ्र्यो । उहाँले राज्यको पैसा खर्च गर्नु भयो होला । आठबीसका कोरोना संक्रमितलाई दैलेख राख्नु गलत नै थियो । अहिले नौ जनामा कोरोना संक्रमण भइसकेको अपुष्ट खबर आइसकेको छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले एम्बुलेन्स पुग्ने स्थानमा तयारी गर्ला तर साविक कर्णालीमा अवस्था के होला ? त्यहाँ गाडी नै जाँदैन । भगवान नमान्नेकालागि केही नहोला । प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व सम्झिनु पर्छ । वडाको अधिकार खोस्न पाईन्छ कि पाईदैन, हाम्रो काम कोअर्डिनेसन गर्ने हो । समन्वय गर्ने हो ।’ उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा तत्काल दिने गरि कानून ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
एक नम्बर प्रदेश बाहेक अन्यत्र जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा पाएका छैनन् । हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि आवश्यक कानून बनाइदिन पथ्र्यो अहिले सम्म बनाईएको छैन । सरकारको यतातिर ध्यान जान आवश्यक छ उनले भने ।
‘सिडियोले मन्त्री टेर्दैनन् । संघीय सरकारसँग समन्वय हुन्छ कि ? आवाज उठाउने कि नउठाउने ? सेना विनाका सेनापतिले केहि गर्न सक्दैन । सरकारले तत्काल आफ्ना नागरिक ल्याउन जरुरी छ । कोरोना गरिब निमूखालाई मात्रै लाग्दैन । सरकारलाई हामी साथ दिन तयार छौं ।’ उनले भने, ‘सरकारले पक्षपात नगरोस । आफ्ना स्थानमा मात्रै डाक्टर पठाउने काम नगरौं । कर्णाली सरकारले हेलिकप्टर नेपाली सेनाको प्रयोग गर्नु पथ्र्यौ । निजी दलालहरुका हेलिकप्टर प्रयोग नगरे हुन्थ्यो । हेलि उडाउन पाईन्छ तर नीजि कम्पनीहरुले लुटिरहेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता एवम प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कंडेलले छिमेकी देशले यस्तै मौका छोपेर नेपालको भूभाग हडप्ने गरेको बताए । ‘एक जनमाना थियो । सरकारको बैठकमा त्यो देशको प्रतिनिधि बसाल्ने मुलुक थियो । यो समस्या पुरानो हो । नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरि सरकारका तर्फबाट नक्सा जारी गर्ने काम ऐतिहासिक अवसर हो । संघीय सरकारले हिम्मत राखेको छ । आपत विपदमा देश लडिरहेका बेला अभिनेत्री मनिषा कोइराला प्रति सम्मान छ । उनले हिम्मत राखेर बोलेकी छिन् । सारा भारतका मिडिया नेपाल विरुद्ध लागिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘परिस्थिति विशेष हो । कामकारवाही नियमित नै हुन्छ गर्नुपर्छ । दुइ महिना अघि कोभिड थिएन । आत्मसमीक्षा गरौं । नयाँ जिम्मेवारीका साथ अघि बढेको खण्डमा सबैको साथ पाईन्छ । पार्टीका आधारमा विचार बनाउने चलन छ । अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री माथि एक खालको टिप्पणी भइरहेको थियो । एक हप्ता अगाडी केहि भन्नेहरु अहिले प्रशंसा गरिरहेका छन् । पक्षधरता, अनुहार हेरेर हुँदो रहेनछ । प्रधानमन्त्रीले एक हप्ता अगाडी देखाएको कामलाई आज सबैले प्रशंसा गरेका छन् ।’
उनले जथाभावी बजेट बाँडने काम गलत भएको बताए । ‘कति दिन हो कोरोना आतंक हुने यो थेग्ने फिक्स छैन । ढुकुटी सकिदै गयो भने हामी कहाँ जाने ? तपाईले बाँडेका पैसा खर्च गर्न नसकिने भनेकै बेलामा पैसा गयो त । दामाशाहीको रुपमा हामीलाई पैसा आउँछ । जथाभावी पैसा बाँडदै गएको खण्डमा समस्या हुन्छ । ख्याल गर्नुहोस ।’ उनले भने, ‘संक्रमित नदेखिएको समयसम्म हामी अंकमाल गर्न थाल्यौं । अहिले देखिइसकेपछि तेरो र मेरो भनेका छौं । व्यवहारमा समस्या देखा परेको छ । ख्याल नगरीकन जहाँ देख्यो त्यहाँ योजना बनाउने हो भने समस्या हुन्छ । क्वारेन्टाईन अभियानकै रुपमा बनाइएको छ । जनताले आफैले क्वारेन्टाईन बनाएर त्यसको सुरक्षा गर्न सजिलो रहेनछ । क्वारेन्टाईनमा गएर खुरुक्कै बस्लान जस्तो मलाई लागेको छैन । क्वारेन्टाईन बनाइएको छ, बराबर प्रयोग भएको छैन । त्यो क्वारेन्टाईनमा को बसेका छन् । कसकालागि बनाइएको हो ?
नेता कंडेलले सामाजिक दुरी कायम गरेर भएपनि काम गर्नु पर्ने बताए । ‘बन्दा बन्दीबाट निश्चित व्यक्तिले फाइदा लिएका छन् । निर्माण सामाग्री प्रयोग भइरहेका छैनन्, मूल्य बढेको बढ्यै छ । यसमा सरकारले समन्वय गर्न आवश्यक छ । क्वारेन्टाईनमा लट अनुसार राखौं । कोरोना रहेसम्म हाम्रो प्रदेश चल्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । निर्माण व्यवसायीले अहिले कोरोना भन्ने बहाना पाएका छन् । सरकारले जिल्लामा दुइ तिन कामहरु गर्न लगाइनुपथ्र्यो । सामाजिक दुरी कायम गरेर भएपनि काम गराउनुपथ्र्यो ।’ उनले भने ।
प्रदेश सभा सदस्य शोसिला शाहीले सरकारले सामाजिक दुरी कायम गरेर भएपनि विकासका कामहरु गर्नु पर्ने बताईन । सरकारले राम्रो काम गरेको खण्डमा सर्मथन गर्ने र नराम्रो काम गरेको खण्डमा आफूले विरोध गर्ने बताईन ।